Dr. Tint Swe's Writings: In vitro fertilization (IVF) ပြင်ပမှာ သန္ဓေတည်စေနည်း
In vitro fertilization (IVF) ပြင်ပမှာ သန္ဓေတည်စေနည်း
၁။ ဆရာ အမျိုးသမီးကအသက် (၃၇) နှစ်ပါ။ Ivf နည်းနဲ့သားလောင်းလေး (၂ ) ခုထည့်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် (၈) ပတ်ရပြီး Ultrasound ရိုက်Mကည့်တော့ (၁) ယောက်တည်းပါဆရာ။ တခြားသားလောင်းလေးက ဘယ်လို ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ သိပါရစေခင်ဗျာ။
အဲလိုဖြစ်တတ်လို့ တခုမက ထည့်ရတယ်။ ဘလော့မှာ IVF စာ ဖတ်နိုင်။
၂။ သမီးက PCOS ရောဂါရှင်ပါ။ metformin ကိုတနေ့ 1000mg သောက်နေရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လကစပြီး ရာသီ မှန်လာပါတယ်ဆရာ။ သမီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလဲ ကလေးအရမ်းလိုချင်ပါတယ်ဆရာ။ သမီးမှာ ကလေးရနိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိလာနိုင်ပါဦးမလားရှင်။ ပြီးတော့သမီးတို့ IVF နည်းနဲ့ကလေးယူချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာခုနေထိုင်တဲ့ အိန္ဒိယမှာ လာရောက်ကုသရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလားဆရာ။ ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစားရိတ်လေးနဲ့ အောင်မြင်မှုနှုန်းလေးကို သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ သမီးအားကိုးစွာဆရာ့ရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေပါ့မယ်ရှင့်။
ဆရာ အိန္ဒိယမှာမနေရတော့တာ ၆ လရှိသွားပါပြီ။ (ဒီစာကို ပြန်တင်တော့ ၃ နှစ်ခွဲရှိပြီ။) ကုန်ကျစရိတ် မသိပါ။ လှမ်းမေးရင် ရပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ စာတပုဒ် ပို့ပါတယ်။
Test-tube babies ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားဆိုတာ ကြားဘူးကြပါမယ်။ ၁၉၇၈ တုံးက အင်္ဂလန်မှာ လူးဝစ် ဘရောင်းကို မွေးခဲ့တာကနေစပြီး လူသိများလာတာပါ။ သူဟာ သူ့မိခင်ရဲ့ဝသားအိမ်ထဲမှာ မနေခဲ့ရပါ။
Artificial insemination နည်းမှာတော့ ခပ်ရှင်ရှင်းပါ။ သုက်ပိုးကို သားအိမ်ထဲကို တမင်တကာ ထည့်ပေးနည်း လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ IVF နည်းမှာတော့ မျိုးဥနဲ့ သုက်ပိုးတွေကို ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာပေါင်းစပ်ပြီး သန္ဓေဖြစ်လာစေတယ်။ နောက်ပြီးမှ သားအိမ်ထဲကို ထည့်ပေးရပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးတယ်။ အကုန်အကျများတယ်။ ကလေးမရသေးတဲ့အတွဲတွေထဲက ၅% ကသာ ဒီနည်းလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၁ ကစပြီး ယူအက်စ်မှာ စလုပ်လာတာကနေ ကနေ့အထိ အဲလို IVF နည်းနဲ့မွေးတဲ့ကလေးပေါင်း ၂ သိန်းကျော်နေပါပြီ။
1. Endometriosis သားအိမ်ရောဂါ၊
2. Low sperm counts သုက်ပိုးနည်းခြင်း၊
3. Problems with the uterus or fallopian tubes သားအိမ်နဲ့ ပြွန်ရောဂါ၊
4. Problems with ovulation မျိုးဥမထွက်ခြင်း၊
5. Antibody problems that harm sperm or eggs သုက်ပိုးနဲ့ မျိုးဥကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ‘အင်တီဘော်ဒီ’ ထွက်ခြင်း၊
6. The inability of sperm to penetrate or survive in the cervical mucus သားအိမ်အဝကအချွဲထဲကို သုက်ပိုးက ထိုးဖေါက်မဝင်နိုင်ခြင်း၊
7. An unexplained fertility problem ရှင်းမပြနိုင်တဲ့အကြောင်းခံ။
ကလေးမရသေးသူတွေအတွက် IVF နည်းကို အရင်ဆုံးနည်းအနေနဲ့ အားမကိုးပါ။ Fertility drugs မျိုးဥထွက်ဆေး ပေးနည်း၊ ခွဲစိတ်နည်း နဲ့ Artificial insemination သုက်ပိုးအပြင်ကနေ ထည့်ပေးနည်းတွေနဲ့ မရတော့မှသာ လုပ်ပါမယ်။
ဒီနည်းမှာ ပဌမအဆင့်အနေနဲ့ ဟော်မုန်းဆေးထိုးပေးပါတယ်။ ဒီနည်းကြောင့် လစဉ်မျိုးဥက တခုမက ထွက်လာမယ်။ မျိးဥထုတ်ယူနိုင်ခြေကို စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်မယ်။ Retrieval procedure မျိုးဥထုတ်ယူဘို့ ပြင်ဆင်မယ်။ ဆေးတွေ ထိုးပေးမယ်။ မျိုးဥတွေ မျိုးဥအိမ်ကနေထွက်လာစေမယ်။ အချိန်ကိုက်လုပ်ဘို့ အရေးကြီးတယ်။ မျိုးဥအိမ်ထဲက ဖေါ်လီကယ်ထဲကနေ ရင့်မှည့်နေတဲ့မျိုးဥ မထွက်ခင်မှာ ထုတ်ယူဘို့ ဖြစ်တယ်။ စောလဲမရ၊ နောက်ကျလဲမရပါ။ သွေးစစ်နည်းနဲ့ အာလ်ထွာဆောင်းအရ အချိန်ကိုက်ကို သိနိုင်တယ်။ မတိုင်ခင်ညမှာ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ လိုအပ်ရင် ဆေးပေးမယ်။ တချို့ကို မေ့ဆေးနဲ့လုပ်မယ်။
မျိုးဥအိမ်ထဲက မှန်ကန်တဲ့ ဖေါ်လီကယ်ထဲကနေ ဆေးထိုးအပ်နဲ့ မျိုးဥကိုထုတ်ယူမယ်။ နာရီဝက် တနာရီသာကြာမယ်။ ထုတ်ယူလိုက်တဲ့မျိုးဥကို ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာဘဲ ချက်ချင်း သုက်ပိုးနဲ့ ပေါင်းစပ်စေမယ်။ ခင်ပွန်းက ကျန်းမာသူဆိုရင် သူ့သုက်ပိုးကို သုံးမယ်။
စောင့်ကြည့်မှုကို ဆက်လုပ်နေပါမယ်။ ၅ ရက်စောင့်လိုက်ရင် Embryo သန္ဓေဟာ more advanced blastocyst stage အဆင့်ရောက်ပါပြီ။ အဲသည်အချိန်မှာ သန္ဓေကို သားအိမ်ထဲ ထည့်ပေးပါမယ်။ သန္ဓေတခုမက ၃-၄ ခုလဲ ထည့်နိုင်တယ်။ ကသီတာ ခေါ်တာလေးနဲ့ ဗဂျိုင်းနားကနေ သားအိမ်ထဲထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ မျိုးဥထုတ်ယူရသလောက် မခက်ဘူး။ အိပ်ယာထဲမှာ ဆေးရုံတက်နေသလို နားနေရပါမယ်။ ဆရာဝန်က ကိုယ်ဝန်အတွက် သွေး-ဆီးစစ်ပါမယ်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ သုက်ပိုးအရေအတွက်နည်းနေရင် IVF နည်းနဲ့အတူ Intracytoplasmic sperm injection သုက်ပိုး ဆေးထိုးနည်းကိုပါ တွဲလုပ်နိုင်တယ်။ Semen စီမင်ထဲကနေ Sperm သုက်ပိုးကို ထုတ်ယူမယ်။ တချို့ကိုတော့ Testicles ကျားအစိထဲကနေ ယူမယ်။ ယူတာကို Egg မျိုးဥထဲ ထိုးပေးရတယ်။
IVF ဘယ်လောက်အောင်မြင်သလဲဆိုတာ ဘာလို့ကလေးမရသေးသလဲဆိုတာအပေါ်နဲ့ တခြားအကြောင်း အချက်တွေအပေါ် မူတည်တယ်။ အသက်အရွယ်လဲ စကားပြောတယ်။ အမျိုးသမီးရဲ့အသက်အရွယ် အရေးပါတယ်။ ၃၅ နှစ်အောက်ဆိုရင် ၃၉့၆% အောင်မြင်တယ်။ ၄ဝ ကျော်ရင် ၁၁့၅% ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းနည်းတွေက အသက်ကြီးလာလဲ အခွင့်အလမ်းတူလောက်ဖြစ်လာတာ အားရှိစရာကောင်းတယ်။
အထောက်အကူနည်းနဲ့ ကလေးရအောင်လုပ်နည်းတွေဖြစ်တဲ့ IVF, GIFT နဲ့ ZIFT နည်းတွေကို Assisted reproductive technology (ART) လို့ခေါ်တယ်။ ၂ဝဝ၉ စာရင်းဇယားတွေအရ IVF နည်းကို ၉၉% သုံးတယ်။
တခါကြိုးစားမှုလုပ်တာကို ဆိုက်ကယ်တခုလို့ ခေါ်တယ်။ ဆိုက်ကယ်အားလုံးတွက်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနှုန်း ၂၉့၎% ရှိတယ်။ ၂၂့၎% အရှင်မွေးတယ်။
ရလာတဲ့ Embryos သန္ဓေတွေကို မသုံးသေးရင် အေးခဲနည်းနဲ့ သိမ်းထားနိုင်တယ်။ ဒုတိယ၊ တတိယအကြိမ်တွေ ထပ်ကြိုးစားဘို့ အကုန်အကျသက်သာမယ်။ သူများကိုလဲ လှူနိုင်တယ်။ ယူအက်စ်မှာ IVF cycle ဆိုက်ကယ်တခုအတွက် $12,400 ကုန်ကျတယ်။
• အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုလိုရာဒို၊ ဘူလ်ဒါ တက္ကသိုလ်ကနေ IVF ပြင်ပသန္ဓေတည်နည်းနဲ့ ကလေးရအောင် လုပ်းနည်းကို ဈေးသက်သာတဲ့နည်း တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ တကြိမ်ကြိုးစားမှု ဆိုက်ကယ်တခုအတွက် ဒေါ်လာ ၂၅ဝ သာ ကုန်ကျပါတော့မယ်။
• မျိုးဥထွက်ဆေးကို Generic fertility drugs ဆေးနာမည်ရင်းနဲ့လာတာကိုသာ သုံးမယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း ကိရိယာတွေကိုလဲ အခြေခံကျတာတွေကိုသာ သုံးမယ်လို့ သြစတေးလျ၊ မဲလ်ဘုန်း၊ Monash မိုနက်ရှ် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ (ဂဘ် ကိုဗက်စ်) ကနေ မကာအိုမှာ ကျင်းပတဲ့ ၁၉ ကြိမ်မြောက် Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) ကမ္ဘာ့ကွန်ကရက်မှာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
• စမ်းသပ်ဖန်ပြွန် ၂ ချောင်း၊ ဈေးမကြီးတဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ၊ Low-cost embryo culture method ဈေးနှုန်း ချိုသာတဲ့ သန္ဓေမွေးယူနည်းကို တီထွင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသုံးနေတာက ဒေါ်လာ ၆ သောင်းတန် Incubator အင်ကျူဘေတာထဲမှာ လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။
• စမ်းသပ်ဖန်ပြွန် နံပါတ် (၁) ထဲမှာ (ဆစ်တရစ်အက်စစ်) နဲ့ Sodium bicarbonate ဆိုဒီယမ် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်တွေ သုံးမယ်။ Carbon dioxide solution ကာဗွန်ဒိုင်အောင်ဆိုက်ရည် ရလာမယ်။ ဒီဟာက Fertilization မျိုးစပ်ဘို့ အကောင်းဆုံးအခြေအနေတရပ်ဖြစ်တယ်။
• အဲဒီအခါ စမ်းသပ်ဖန်ပြွန် နံပါတ် (၂) ထဲထည့်မယ်။ Oocytes မျိုးဥ နဲ့ Sperms သုက်ပိုးတွေကို ဆေးထိုးအပ်နဲ့ ထည့်ပေးမယ်။ ရလာတဲ့ သန္ဓေသားကို အနုကြည့်မှန်ဘီလူးနဲ့ စစ်ဆေးမယ်။ နောက် အောင်မြင်တာကို သားအိမ်ထဲကို ပြောင်းထည့်ပေးပါတော့မယ်။
• ဒီဈေးချိုတဲ့နည်းသစ်ကို အသက် ၃၆ နှစ်အောက် အမျိုးသမီးတွေမှာ မျိုးဥ (၈) ခုရစေတဲ့နည်းနဲ့ဆက်လုပ်တာမှာ သုံးနေတဲ့ IVF culture systems ဈေးကြီးနည်းနဲ့ အောင်မြင်နှုန်း မကွာလှတာတွေ့ရပါတယ်လို့ European Society of Human Reproduction and Embryology 2013 Annual Meeting မှာဆိုထားပါတယ်။
• ကိုယ်ဝန်ရနှုန်း ၃ဝ့၎% ရှိတယ်။
• ဒီနည်းသစ်ကြောင့် ချမ်းသာသူတွေသာမက အသင့်အတင့်တတ်နိုင်သူတွေပါ ကလေးရစေဘို့ လက်လှမ်း မီလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) ရာသီမမှန်ရင် ဖတ်ပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/polycystic-ovarian-syndrome-pcos.html